Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Maanta Oo Jimce Ah Qoreen Wargeysyada Yurub - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Maanta Oo Jimce Ah Qoreen Wargeysyada Yurub
Maalin wanaagsan akhristayaasheena sharafta leh meel walba oo aad joogtaan, sida aan inooga barateen waxaan maanta oo Jimce ah idiin soo gudbineynaa wararkii ugu danbeeyay ee ay qoreen wargeysyada iyo warbaahinta qaarada Yurub ee ku saabsan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Paul Pogba ayaan wax dareen ah u qabin inuu kooxdiisa Manchester United ku qasbo inay u ogolaato u wareegista Real Madrid balse uu kaliya ka warsugi doono sida ay wax u dhacaan. (Ilo wareedyo badan oo Yurub ah)
Man United ayaa diyaar u ah inay heshiis kordhin saddex sano oo dheeraad ah ka saxeexato daafaceeda Victor Lindelof iyaga oo mushahar ahaan u siinaya 150,000 si uu baaqi ugu sii ahaado kooxda ilaa 2025. (Mirror)
Paris Saint-Germain ayaa lagu soo warramayaa inay ugu dambayn aqbashay rabitaankii kooxda Barcelona ee Neymar JR iyada oo ka aqbalaysa bixinta 100 Milyan oo lagu daray laba ciyaartoya. (L’Equipe)
Bayern Munich ayaa isha ku haysa saxeexa weeraryahankeedii hore ee Mario Mandzukic kaas oo ay doonayaan inay dib ugala soo wareegaan Juventus oo uu haatan ka tirsan yahay. (Gazzetta dello Sport)
Daafaca Man United lacagta rekoodhka ah ugu soo wareegay ee Harry Maguire ayaa iska diiday mushahar toddobaadle ah oo uu 278,000 pound kaga qaadan lahaa Manchester City kaas oo ka dhigi lahaa daafaca ugu mushaharka badan dunida. (Daily Star)
Paulo Dybala ayaan ku dhawayn inuu ka baxo kooxdiisa Juventus sida uu sheegay agaasimaha ciyaaraha ee kooxdaas ee Fabio Paratici walow ay jiraan kooxo waaweyn oo wali lala xidhiidhinayaa.
Kooxda ree Talyaani ee Roma ayaa doonaysa inay qaab amaah ah ku qaadato daafaca dhexe ee Liverpool ee Dejan Lovern marka laga yimaado xaqiiqada ah in Reds ay kaliya doonayaan inay iibiyaan. (Sky Italy)
Bayern Munich ayaan wali iska dhiibin rabitaankeedii saxeexa garabka kooxda Manchester City ee Leroy Sane walow uu Sane marayo qaliin jilibka ah. (Bild)
Man United ayaa lagu soo warramayaa inay gabi ahaanba soo af-jartay xiisaheedii kabtanka Sporting Lisbon ee Bruno Fernandes iyaga oo shaki ka qaba awoodiisa ciyaareed gaar ahaan saxsanaanta baaskiisa. (Daily Mirror)
Weeraryahankii ka baxay kooxda Liverpool ee Daniel Sturiddge ayaa wadahadalo kula jira kooxda horyaalka MLS-ka ee DC United kuwaas oo doonaya inay ka dhigtaan bedelka Wayne Rooney oo sanadka cusub u wareegaya Derby County.
Weeraryahanka ree Ivory Coast ee Jonathan Kodjia oo ka tirsan Aston Villa ayaa ka bixi kara kooxdaas isaga oo xiiso ka helaya kooxda ree Turkey ee Besiktas. (Ortacizgi)
Alexis Sanchez ayaa doonaya inuu iskaga tago Manchester United kahor inta uusan xidhmin suuqa qaarada Yurub 2-da bisha September. (The Times)
Mario Balotelli oo haatan koox la’aan ah ayaa la filayaa inuu heshiis saddex sano ah u saxeexo kooxda dhawaan usoo dalacday horyaalka Serie A ee Brescia.